Kutadza kusvira iro beche ndichiriona – Vanoda Zvinhu
Kutadza kusvira iro beche ndichiriona
· Updated August 20, 2014
Hama dzangu I’m very disappointed ndakasangana neimwe simbi mubhazi raibva Jozi to H -town .Aiwa ndovakadzi zve iyeyo ukamuona unomutarisa ka 3 ka 4.
Saka I decided to try my luck since ndakanga ndakachenawo plus ndakanga ndine bling bling.Ainge akatsvuka,aine hairy ,aine mahips
akanaka zvake.Handina hangu kudiwa takangopanana macontact details .Ko zvemazuvano ukatopiwa number unenge watodiwa.Asi she promised to visit me in cape town since she was staying in jozi.Ndaakudzoka ndichiripaborder ndokuona maplease callme
back,ma sms achiti akuda kuuya kucape town.
To my surprise it was real takaronga ndokundishanyira zveWeekend.Auya ndakashaya zvokuti ndakatanga foam bath naye tapedza ndaakuda kuchisvira akanga ari naked the whole body,Pamwe I was nervous handizivi ndaakuda kuisa ndokubva ndatunda ndisati ndaisa mboro.
ndakanyara ndakati maybe I first round.Only to find out the same thing ndaakuda kusvira futi ndapedza kudyiwa mboro ndambodyawo beche ndokubva ndatunda zvekare ndisati ndapinza mboro.Ndakazviona kuti akanga afizuka manje .But I understand bcoz amana gumbo iri handisati ndariona mwana anezvidya uyu zvigoti hairy zvakaita yellow .
aaah makuseni ndaakuda kusvira futi ndokutunda ndisati ndapinza mboro kusvika weekend yapera adzoka ndisina kusvira.
Ndakarohwa nehana here kana kuti its abnormal
The First and Only time i cheated on my beautiful wife ndaona muVenda!
Next story Wadiwa Sekuru, ndaita dambudziko nenyaya yekukara beche
Previous story Kusvira nyoro musikana wandanga ndapa lift kuenda kuChitungwiza